Free Thinker: စင်ကာပူရောက် မြန်မာကလေးများအား မြန်မာစာသင်ပေးရေးကိစ္စ
စင်ကာပူရောက် မြန်မာကလေးများအား မြန်မာစာသင်ပေးရေးကိစ္စ
အလျင်တစ်ခါပြောခဲ့သလိုပဲ စင်ကာပူရောက် မြန်မာကလေးငယ်တွေကို မြန်မာစာသင်ပေးမဲ့ အစီအစဉ်လေး စကြည့်ပါမယ်။ ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်းတော့ မတတ်နိုင်ပါ။ အခြားမိတ်ဆွေများရဲ့ အကူအညီလည်း လိုပါတယ်။ ကျွန်တော် စဉ်းစားမိတာ ပြောကြည့်ပါမယ်။
၂။ သင်ပေးမဲ့ ဆရာ/ဆရာမတွေ
၃။ သင်ထောက်ကူပစ္စည်း (ပြဌာန်းစာအုပ်၊ လေ့ကျင့်ခန်းစာအုပ်၊ ကစားစရာပစ္စည်း၊ white board စသည်)
၄။ စာသင်လိုတဲ့ ကလေးငယ်တွေ
ကျွန်တော်အလျင်တုံးက အခမဲ့သင်တန်းတွေ သင်ပေးဖူးပါတယ်။ အလကားဆိုတော့ အလကားလိုပဲ သဘောထားပါတယ်။ သာလာယံဇရပ်လို လာချင်လာတယ်။ မလာချင်မလာဘူး။ သင်တန်းဖွင့်မယ်ဆိုတော့ စာရင်းပေးတာ အယောက် ၃၀။ တကယ်လာတာ ၂၀။ ၂ ပတ်လောက်လဲကြာရော ၁၀ ယောက်။ သင်တန်းဆင်းတော့ ၅ ယောက်ပဲကျန်တယ်။ ဒါ တကယ့် အဖြစ်အပျက်။ ပင်နင်ဆူလာမှာ piping သင်တန်းပေးတုံးက အတွေ့အကြုံပါ။ ကျောင်းဆရာဘ၀တုံးကလည်း ရွာက ကလေးတွေကို ဆယ်တန်း ရူပဗေဒ၊ သင်္ချာ စတာတွေ သင်ပေးခဲ့တယ်။ အလားတူပဲ။ ကလေးတွေက လာချင်လာတယ်။ မလာချင် မလာဘူး။
ဒီတော့ အခု မြန်မာစာသင်တန်းကို အခမဲ့မလုပ်ပါဘူး။ သင်တန်းကြေးပေးရပါမယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီသင်တန်းကြေးကို ဘယ်သူမှ ယူမှာမဟုတ်ဘဲ မြန်မာနိုင်ငံက နွမ်းပါးတဲ့ကျောင်းတွေကို စာအုပ်စာတမ်း၊ ကျောက်သင်ပုန်း စသဖြင့် လိုအပ်တာတွေ ၀ယ်ယူ လှူဒါန်းပါမယ်။ ပိုက်ဆံတိုက်ရိုက်လှူတာမဟုတ်ဘဲ ကျောင်းမှာလိုတဲ့ပစ္စည်းကို ကိုယ့်ဘာသာဝယ်ပြီး လှူမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုတော့ အဲဒါတွေကို ဆွေးနွေးဘို့ ရပ်ဝေးရပ်နီးမှ စိတ်ဝင်စားသူမိတ်ဆွေများကို ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
နေ့ရက်။ ။ ၁၂ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၁၇
အချိန်။ ။ ညနေ ၅ နာရီ
နေရာ။ ။ Blk 663D, Jurong West St. 65, #15-233, S(644663)
Contact: U Aye Nyein - 97303027, email: aye475@gmail.com
စင်ကာပူရောက် မြန်မာကလေးများအား မြန်မာစာသင်ပေးရေးကိစ္စ စည်းဝေးပွဲမှတ်တမ်း
၂။ ဒေါ်မိုးသူဇာ @ Ivory လှမြင့်
ဦးစွာ ဦးအေးငြိမ်းက စည်းဝေးပွဲခေါ်ရခြင်း အကြောင်းရင်းကို အောက်ပါအတိုင်း ရှင်းပြပါသည်။
စင်ကာပူတွင်ရောက်ရှိနေထိုင်လျက်ရှိသည့် မြန်မာကလေးငယ်များအနေနှင့် မြန်မာစာ သင်ကြားရေးတွင် အခက်အခဲဖြစ်လျက်ရှိသည်ကို ကူညီရန် ဤအစီအစဉ်ကို အကောင် အထည်ဖော်ရကြောင်း၊ ဤသို့ အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် တစ်ဦးကောင်း တစ်ယောက်ကောင်းနှင့်လုပ်ရန် မဖြစ်နိုင်။ အများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်လိုကြောင်း။ ထို့ ကြောင့် လုပ်ကိုင်မည့်အစီအစဉ်ကို အသေးစိတ်ဆွေးနွေးလိုသောကြောင့် စိတ်ပါဝင်စား သူများကို ဖိတ်ခေါ်ကာ ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း။ သို့သော် အားတက်သရော လာရောက်ကြသည်ကို မတွေ့ရခြင်းအပေါ် များစွာစိတ်ပျက်မိကြောင်း။
ယခုကဲ့သို့ မြန်မာစာ သင်ကြားပေးရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်
အားလုံးဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးချက်အရ သင်ကြားရသည့်ရည်ရွယ်ချက်ကို အောက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်ပါသည်။
သင်တန်းဖွင့်လှစ်ပြီး မြန်မာကလေးငယ်များအား မြန်မာစာ သင်ပေးရခြင်း၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်မှာ မြန်မာလူမျိုးဖြစ်သည့် နောက်မျိုးဆက် ကလေးငယ်များအား အမိ မြန်မာစာကို သေချာဂဏစွာ တတ်မြောက်စေရန် နှင့် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးစံများ ကိုပါ သိရှိနားလည်လာစေရန်
သင်ကြားပေးရခြင်း အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ မြန်မာစာကို သေသေချာချာ စနစ်တကျ တတ်မြောက်စေလိုခြင်း ဖြစ်သောကြောင့် အတန်းစာမေးပွဲ ဖြေဆိုအောင်မြင်ရုံမျှ ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် လာသူများကို လက်သင့်မခံပါ။
(အကြောင်းမှာ ၎င်းတို့ကြောင့် အခြားသူများကိုပါ အနှောင့်အယှက် ဖြစ်မည်စိုး၍ ဖြစ်ပါ သည်။)
(မြန်မာစာကို သေချာကျနစွာ တတ်မြောက်သွားလျှင် စာမေးပွဲဆိုသည်မှာ ခဲယဉ်းလှတော့ သည့်အရာမဟုတ်ဟု ယူဆပါသည်။)
ရောက်လာမည့် ကလေးငယ်များတွင် -
၁။ ယခုမှ အစိမ်းသက်သက် စတင်သင်ကြားရမည့်အုပ်စု
၂။ မြန်မာပြည်တွင် လေးငါးတန်းတက်ခဲ့ဖူးပြီး အခြေခံ အတော်အတန် ရထားသည့်အုပ်စု ဟု နှစ်မျိုးခွဲနိုင်သဖြင့် -
သင်တန်းသား လက်ခံသည့်အခါ -
၁။ အခြေခံ* နှင့်
၂။ အလယ်ဆင့်** ဟု အုပ်စုနှစ်ခုခွဲပြီး လက်ခံပါမည်။
* အခြေခံအဆင့်တွင် အသက် ၅ နှစ်မှ ၈ နှစ်ထိ လက်ခံပါမည်။
** အလယ်ဆင့်တွင် အသက် ၈ နှစ်နှင့်အထက် လက်ခံပါမည်။
ဆွေးနွေးစဉ်က အသက်အုပ်စု မပါဝင်ပါ။ ပိုမိုသင့်တော် သည့် အသက် အပိုင်းအခြား တစ်ခုကိုပြင်ဆင် ရန် အကြံပြုနိုင်
စာသင်ရန်အတွက် (၁) ဆရာမဒေါ်ခိုင်ခိုင်အောင်မှ ပင်နင်ဆူလာရှိ သူ့ရုံးခန်းကို သုံးနိုင်ပါ သည်ဟု ကမ်းလှမ်းထားကြောင်း၊ (၂) နောက် တစ်နေရာမှာ မိတ်ဆွေတစ်ဦး၏ အကူ အညီဖြင့် တိုးပါးရိုးဘုန်းကြီး ကျောင်းတွင်လည်း ရနိုင်ကြောင်း ပြောပြရာ -
ထို နှစ်နေရာအနက် အလယ်ကျသည့် ပင်နင်ဆူလာဆိုလျှင် အများအတွက် သွားရေး လာရေး ပိုအဆင်ပြေမည်ဟုတိုင်ပင်ကာ ပင်နင် ဆူလာတွင် စာသင်ခန်းဖွင့်ရန် ဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။
သင်ကြားမည့် ဆရာဆရာမများ ဖိတ်ခေါ်ခြင်း
Ø စာသင်ကြားပေးမည့် ဆရာဆရာမများ ရွေးချယ်ရာတွင် အတွေ့အကြုံရှိပြီး အမှန်တကယ် ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် သင်ကြားပေးနိုင်သူများကိုသာ ဦးစားပေး ရွေးချယ်ရန်
Ø မည်သည့်အတန်း (အခြေခံ၊ အလယ်ဆင့်) ကို သင်ကြားပေးနိုင်မည်၊ မည်သည့်ရက်များ တွင် သင်နိုင်မည် စသည်တို့ကို မေးမြန်းစာရင်းယူရန်။
Ø သင်ကြားနေသည့် ဆရာ/မ မအားပါက အစားဝင်သင်ရန် အရန် ဆရာ/မကိုပါ စီစဉ်ထား ရန်။
ဦးအေးငြိမ်းက ဖေ့စ်ဘုတ်မှ ကြေငြာပြီး ဖိတ်ခေါ်ပါမည်။
၁၃ - ၂ - ၁၇
စိတ်ပါဝင်စားသူ များ ပါဝင်နိုင် သော်လည်း သင်ကြားမှု အတွေ့အကြုံ ရှိသူကို ဦးစား ပေးပါမည်။
သမားရိုးကျအတိုင်း စာအုပ်ထဲမှစာချည်း သင်နေခြင်းထက်
ü သင်ခန်းစာပါသည့် ဗီဒီယိုများဖွင့်ပြခြင်း
ü မြန်မာစာတန်းထိုး ဗီဒီယိုများဖွင့်ပြလျှက် ဖတ်ခိုင်းခြင်း
ü ပုံပြောခိုင်းခြင်း၊ ဇာတ်နိပါတ်ပုံဝတ္ထုများ ဖတ်ပြခြင်း
ü စာဖတ်ပြီး အပြန်အလှန် ပြောပြစေခြင်း
ü စာသင်ခြင်းကို အထောက်အကူပြုမည့် ဂိမ်းများ ဆော့ကစားစေခြင်း
- စသည့်နည်းများဖြင့် သင်ကြားပါမည်။
မိမိတွင်ရှိသည့် သင်ထောက်ကူ ပစ္စည်းများလည်း ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
လစဉ် စင်ကာပူဒေါ်လာ ၂၀ ကောက်ပါမည်။
အသုံးစရိတ်နှုတ်ပြီး ပိုငွေကို မြန်မာပြည်မှ ချို့တဲ့သောကျောင်းများအား စာအုပ်နှင့် စာရေးကိရိယာ စသည် ၀ယ်ယူလှူဒါန်းပါမည်။
သင်တန်းချိန် - ၁ နာရီခွဲ (တစ်ပတ် - တစ်ချိန်)
အခြေခံ - စနေနေ့ နေ့ခင်းပိုင်း
အလယ်ဆင့် - တနင်္ဂနွေ ညနေပိုင်း
သင်တန်းတစ်ခုလျှင် တစ်နှစ် ဖြစ်ပါသည်။
အခြေခံတစ်နှစ်ပြီးလျှင် အလယ်ဆင့် တစ်နှစ် သင်ပါမည်။
အလယ်ဆင့်တစ်နှစ်ပြီးလျှင် အခြေအနေကို ဆန်းစစ်သုံးသပ်ပြီး အဆင့်မြင့် တစ်နှစ် သင်ပါမည်။
စုစုပေါင်း သင်တန်းကာလ ၃ နှစ် ဖြစ်ပါသည်။
၁။ ပထမဆုံးနေ့တွင် ကလေးများ စိတ်လှုပ်ရှားမှုမဖြစ်စေရန် မိဘများနေပေးရန် မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။
၂။ လစဉ်ကြေးအပြင် သင်တန်းအတွက် အခြားပစ္စည်းပစ္စယများဝယ်လို၍ ဖြစ်စေ၊ ဤသင်တန်းမှရသော ရံပုံငွေဖြင့် မြန်မာပြည်မှနွမ်းပါးသောကျောင်းများ လှူရာတွင် ပိုမို ပါဝင်လှူဒါန်းလို၍ဖြစ်စေ ထပ်မံလှူဒါန်းမည်ဆိုပါက လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။
၃။ ကလေးများ စာဖတ်နိုင်စေရန်၊ စာဖတ်ဝိုင်းကလေးများလုပ်ပေးရန် ကာတွန်း၊ ပုံပြင် စသော စာအုပ်များ ၀ယ်ယူစုဆောင်းကာ စာကြည့်တိုက်ကလေးတစ်ခု ပြုလုပ်မည်ဟု ရည်မှန်းပါသည်။
မြန်မာစာသင်ကြားပေးလိုသည့် ဆရာဆရာမများ ဖိတ်ခေါ်ခြင်း
စင်ကာပူရောက် မြန်မာကလေးများအား မြန်မာစာသင်ပေးရေးအတွက် မြန်မာစာသင်ကြားပေးလိုသည့် ဆရာဆရာမများအား ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
အရည်အချင်းများမှာ အောက်ပါတို့ ဖြစ်သင့်ပါသည်။
၁။ စာသင်သည့်အတွေ့အကြုံရှိသူ (အထူးသဖြင့် ကလေးများကို စာသင်ပေးဖူးသူ)
၂။ မြန်မာစာကို ကောင်းစွာတတ်ကျွမ်းသူ
၃။ ကလေးများကို တတ်မြောက်စေလိုသော စေတနာနှင့် အမှန်တကယ်စာသင်ပေးလိုစိတ်ရှိသူ
၄။ (အရေးကြီးကိစ္စပေါ်လာ၍ တစ်ခါတလေ ပျက်ကွက်သည်မှအပ) သင်တန်းချိန် ပုံမှန်လာနိုင်သူ
မှတ်ချက်။ ။ ယခုသင်တန်းမှာ အခမဲ့ (နီးနီး) သင်ပေးသော သင်တန်းဖြစ်၍ ဉာဏ်ပူဇော်ခ ချီးမြှင့်မည် မဟုတ်ပါ။ သင်တန်းတစ်ပတ်ပြီးမှ မေတ္တာလက်ဆောင် ပေးပါမည်။
စိတ်ပါဝင်စားသူများ message box တွင် နာမည်နှင့် ဖုံးနံပါတ်ထားခဲ့ပါ။ သို့မဟုတ် ကျွန်တော့်ဖုံးနံပါတ် 9730 3027 သို့ နာမည်ပို့ပေးပါ။
သင်တန်းတစ်ခုအတွက် ဆရာ/မ သုံးဦးလက်ခံမည်ဟု ရည်မှန်းထားပါသည်။
ထိုသုံးဦး အလှည့်ကျ ၀င်သင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး သင်တန်းသေချာပြီဆိုလျှင် အားလုံးနှင့်ညှိ၍ အချိန်ဇယားဆွဲပေးပါမည်။
ကလေးများကို မြန်မာစာသင်ကြားပေးဘို့ စိတ်ဝင်စားတဲ့သူ အခုဆို (၁၀) ယောက်ရှိပါပြီ။
အခုလို စိတ်ဝင်တစားဆက်သွယ်လာကြတဲ့အတွက် ၀မ်းလည်းသာ၊ ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်။
သူတို့အားလုံးကို လာမဲ့စနေနေ့ (18/02/17) ညနေ ၅ နာရီမှာခေါ်ပြီး သင်ကြားမဲ့ပုံစံတွေ ညှိနှိုင်းပါမယ်။
တပါတည်း သူတို့ကို သင်ဘို့စာရွက်စာတမ်းတွေ ပေးလိုက်ပြီး လေ့လာ၊ လေ့ကျင့်ခိုင်းလိုက်ပါမယ်။
ကနေ့ညနေ စာသင်ခန်းကိုသွားကြည့်တော့ အခန်းက (၁၅) ယောက်လောက်ပဲ ဆန့်ပါလိမ့်မယ်။
စာသင်ချိန်က ညနေ ၅ နာရီခွဲကနေ ၇ နာရီထိ၊ ဒါမှမဟုတ် ညနေ ၆ နာရီကနေ ၇ နာရီခွဲထိ။ (သင်မဲ့ဆရာဆရာမများနဲ့ ညှိပြီး အတည်ပြုပါမယ်။)
မတ်လ ပထမစနေနေ့ (၄ မတ်လ၊ ၂၀၁၇) ကစပြီး သင်တန်းစဖွင့်မယ်လို့ ရည်မှန်းပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် အခုကစပြီး ကျောင်းသားလက်ခံပါတော့မယ်။
link ပေးထားတဲ့ပုံစံကိုဖြည့်ပြီး aye475@gmail.com ကိုဖြစ်ဖြစ် ဒီ ဖေ့စ်ဘုတ် messenger ကပဲဖြစ်ဖြစ် ပေးနိုင်ပါတယ်။ မလာတဲ့သူတွေရှိနိုင်တဲ့အတွက် (၂၀) ထိလက်ခံပါမယ်။ အရင်လာသူအရင်နေရာပေးတဲ့စနစ် ဖြစ်ပါတယ်။
မိမိတို့သားသမီးများကို မြန်မာစာသင်ပေးဘို့ စာရင်းပေးကြတာ အခြေခံသင်တန်းအတွက် စာရင်းပြည့်သွားပြီမို့ နောက်ထပ် လက်မခံတော့ပါဘူး။ စာရင်းပေးတဲ့အထဲမှာ မမြတ်နိုးခင်၊ မရည်မွန်အောင်၊ မသန့်သီရိဝင်းတို့က အသက် (၄) နှစ်ပဲရှိသေးလို့ လက်မခံပါဘူး။ စာသင်ဘို့ရာ သိပ်ငယ်ပါသေးတယ်။ အမှန်ဆို (၅) နှစ်တောင် သိပ် မသင့်တော်ပါသေးဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ကို အတန်းထဲမှာ အတင်းစာမလုပ်ခိုင်းသေးပဲ တခြားသူတွေရေးတာ ဆိုတာ ဖတ်တာတွေ နားထောင်ရင်း ယဉ်ပါးသွားပြီး အခြေခံ ရအောင် လက်ခံထားတာပါ။
အဲလေ၊ တကယ်လို့ အခြေခံအဆင့်မှာ တစ်တန်းစာ (၁၅) ယောက်ထပ်ပြည့်ရင် နောက်တစ်တန်းထပ်ဖွင့်ပေးပါမယ်။
အလယ်ဆင့် ((၄) တန်းနှင့်အထက်) ကတော့ တစ်ယောက်ပဲလာပါသေးတယ်။ သင်တန်းတစ်ခုစာ အနည်းဆုံး (၅) ယောက်မှ မပြည့်ရင် အလယ်ဆင့်အတွက် မဖွင့်ပါဘူး။
(အင်း၊ သင်ယူချင်တဲ့ကျောင်းသားထက် သင်ပေးချင်တဲ့ဆရာကပိုများနေပြီဗျို့။)
စင်ကာပူရောက် မြန်မာကလေးငယ်များအား မြန်မာစာသင်ပေးဘို့ စာရင်းပေးထားသူများ သင်ကြားရေးနှင့်ပတ်သက်၍ အနည်းငယ် ဆွေးနွေးစရာရှိပါသဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း ကြွရောက်ကြဘို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
နေ့ရက်။ ။ ၁၈ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၁၇
နေရာ။ ။ Blk 663D, Jurong West St. 65
တော်တော်များများကို တယ်လီဖုန်း message များလည်း ပို့ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
သင်တန်းအသေးစိတ်ကို စည်းဝေးပွဲပြီးရင် ထုတ်ပြန်ပေးပါမယ်။
စင်ကာပူရောက် မြန်မာကလေးငယ်များအတွက် မြန်မာစာသင်တန်း
ကနေ့ညနေ သင်မဲ့ဆရာမများနဲ့ ဆွေးနွေးပြီးလို့ စာသင်တာကို အောက်ပါအတိုင်း စတင်ပါမယ်။
သင်တန်းစမည့်ရက်။ ။ မတ်လ ၄ ရက်၊ ၂၀၁၇ (စနေနေ့)
သင်တန်းချိန်။ ။ ညနေ ၆ နာရီမှ ၇း၃၀ နာရီ
သင်တန်းနေရာ။ ။ #05-21A
ဘာတွေယူလာရမလဲ။ ။ ပညာလိုချင်တဲ့စိတ်ပဲယူလာပါ။ တခြားဘာမှယူလာစရာမလိုပါ။ စာအုပ်၊ စက္ကူနဲ့စာရေးကိရိယာ အားလုံး ပံ့ပိုးပေးပါမယ်။
မှတ်ချက်။ ။ ပြောစရာတွေရှိလို့ ပထမဆုံးနေ့မှာတော့ မိဘတစ်ယောက်ယောက် လာဘို့လိုပါတယ်။ နောက်ပြီး ကျောင်းလခ ၂၀ လည်း ယူလာစေချင်ပါတယ်။
စုစုပေါင်း သင်တန်းအပ်သူ အစိတ်ရှိပါတယ်။ အားလုံးဝိုင်းဆွေးနွေးကြတော့ ၄ နှစ်ကလေးတွေလည်း လာပါစေ။ သူတို့ကိုတော့ တခြားသူတွေ ဆိုတာ၊ သင်တာပဲနားထောင်ခိုင်းမယ်။ သင်တာကြားတာ သိပ်မလုပ်သေးဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီအတွက် (၄) နှစ်သားကလေးတွေလည်း လာကြစေလိုပါတယ်။
ကလေး (၂၃) ယောက်ဆိုတော့ နှစ်ခန်းခွဲလိုက်ပါတယ်။ သင်ပေးမဲ့ဆရာမတစ်ယောက်၊ ဘေးက၀ိုင်းကူပေးမှာ အနည်းဆုံး နှစ်ယောက် ရှိပါမယ်။ ဘေးက ၀ိုင်းကူပေးမယ်ဆိုတာ ကလေးတွေစာရေးရင် အဆွဲတွေမှန်လား၊ စာဆိုရင် “တ”
နဲ့ “သ” နဲ့ ကွဲသလား။ “စ” နဲ့ “ဆ” နဲ့ ကွဲသလား စသဖြင့် လိုက်ကြည့် ပြင်ပေးမှာကို ဆိုလိုပါတယ်။
ဒီကနေ့ဆွေးနွေးပွဲကို စိတ်ဝင်တစားလာကြတဲ့သူအားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျား။
၁။ သူငယ်တန်း ပြဌာန်းစာအုပ် - အုပ် (၃၀)
၂။ လေ့ကျင့်ခန်း စာရွက်များ တစ်ယောက် (၅) ရွက်နဲ့ အစုံ (၃၀)
၃။ ခဲတံ၊ ချွန်စက်၊ ခဲဖျက်အစုံ ၃၀
၄။ Whiteboard Marker, duster
၅။ အိတ် (၂၀) to put the books, exercise sheets, pencil, eresers etc. Keep at Training Ctr.
၇။ စာကြောင်းတွေ ထွင်ရေးမယ်။
၈။ ပုံပြင်တွေ စုမယ်။
၉။ ကလေးကဗျာတွေ စုမယ်။
စင်ကာပူရောက် မြန်မာကလေးငယ်များအား မြန်မာစာသင်ပေးရေးအတွက် စည်းဝေးပွဲမှတ်တမ်း
ရှေးဦးစွာ ဦးအေးငြိမ်းက မြန်မာစာသင်ကြားခြင်းအကြောင်း ရှင်းပြ ပါသည်။
ကလေးဟူသည်မှာ ပီဘိအဖြူထည်ဖြစ်သဖြင့် ဆိုးသမျှအရောင် သူတို့မှာ ထင်သွားမှာဖြစ်သဖြင့် မိမိဆိုးသည့်အရောင်သည် မှန်မှန် ကန်ကန်ဖြစ်နေရန် အရေးကြီးကြောင်း။ ထို့ကြောင့် ကလေးများကို သင်ကြားရာတွင် လုံးဝအမှားခံလို့မဖြစ်ကြောင်း။
ထိုကဲ့သို့ မမှားစေရန်အတွက် ကလေးများကိုမြန်မာစာသင်ရာတွင် မိမိကိုယ်တိုင်က မြန်မာစာကို မှန်မှန်ကန်ကန်တတ်နေဘို့လိုကြောင်း။ တစ်နည်းအားဖြင့် မိမိသိထားသည်များသည် အမှန်ဖြစ်တာ သေချာဘို့ လိုကြောင်း။ ထိုကဲ့သို့ မိမိသိထားသည် များ မှန်မမှန်ကို ဆရာကြီး များရေးထားသည့် စာအုပ်များနှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးကြည့်ရန် လိုကြောင်း။ ထိုစာအုပ်များကိုလည်း အီးမေးဖြင့် ပို့ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း။
စာသင်နေသည်နှင့်အမျှ မိမိ၏ မြန်မာစာအဆင့်အတန်းကိုလည်း မြှင့်တင်နေဘို့လိုကြောင်း။ ထိုကဲ့သို့မြှင့်တင်နေရန်မှာ မြန်မာစာ နှင့်ပတ်သက်၍ စဉ်ဆက်မပြတ် လေ့လာနေဘို့လိုကြောင်း။ ကျွန်ုပ်တွင် မြန်မာစာနှင့်ပတ်သက်သည့် စာအုပ်အတော်များများ စုဆောင်း ထားသည်ဖြစ်ရာ ထိုစာအုပ်များကို အီးမေးဖြင့်ပို့ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ပို့ပေးသည့် စာအုပ်များကို သေချာစွာလေ့လာကြစေလိုကြောင်း။
ကလေးများကို အရေးသင်ပေးရာတွင် စာလုံးဆွဲပုံများမှန်ကန်ရန် အရေးကြီးကြောင်း။ သူငယ်တန်းမြန်မာဖတ်စာတွင် စာလုံးဆွဲပုံများ ပါသဖြင့် သေချာစွာလေ့လာပြီး မိမိရေးဆွဲနေသည်များ မှန်မမှန် စစ်ဆေးစေလိုကြောင်း။
မြန်မာစာသည် လုံးကောက်အဓိပ္ပာယ်ထွက်သည့်စာလုံးများဖြစ်ပြီး အဖြတ်အတောက်မှားပါက အဓိပ္ပာယ်ပါမှားသွားမည်ဖြစ်သည့်အတွက် အဖြတ်အတောက်များကိုလည်း ငယ်စဉ်ကတည်းက သေသေချာချာ သင်ပေးကြစေလိုကြောင်း။
ထို့ပြင် အသံထွက်ကိုလည်း တစ်လုံးချင်း ပီပီသသထွက်ရန် လေ့ကျင့်ပေးစေလိုကြောင်း။ “တ” နှင့် “သ” ။ “စ” နှင့် “ဆ” ။ “ပ” နှင့် “ဖ” “ဘ” စသည်။ အသံထွက်မှားလျှင် အရေးအသားလည်း မှားတတ် ကြောင်း။
မူလတန်းကလေးငယ်များကို သင်ကြားရာတွင် သိထားရမည့် ဆရာ/ဆရာမများအတွက် လမ်းညွှန်ချက်ကိုလည်း ဖတ်ကြည့်ကြ စေလိုကြောင်း။ (ထိုလမ်းညွှန်ချက်မှာ မူသုံးမျိုးလောက်ရှိရာ အားလုံးကို အီးမေးဖြင့် ပို့ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း)
ကလေးများကို စသင်ရာတွင် အရေးကိုမသင်ဘဲ ကဗျာများ ရွတ်ဆို သင်ကြားရန်၊ ကဗျာများကို ၀ှိုက်ဘုတ်တွင် လက်ဖြင့်ရေး၍သော် လည်းကောင်း ပရိုဂျက်တာဖြင့်ထိုး၍သော်လည်းကောင်း သင်နိုင် ကြောင်း။ (သို့သော် လက်ဖြင့် ၀ှိုက်ဘုတ်တွင်ရေးတာက ပို၍ ဆွဲဆောင်မှုရှိကြောင်း) ကလေးကဗျာများအတွက် ဆရာကြီး မင်းသုဝဏ်၏ မောင်ခွေးဘို့ကဗျာများနှင့် ခေတ်ပေါ်ကဗျာစာအုပ်များ ကို ပို့ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း။
အရေးကိုမူ သင်ခန်းစာတစ်ခုပြီးမှ ထိုသင်ခန်းစာနှင့်သက်ဆိုင်သည့် စကားလုံး၊ စာကြောင်းများကိုလေ့ကျင့်ပေးစေလိုကြောင်း။ ထိုသို့ လေ့ကျင့်ရာတွင် စာအုပ်ထဲတွင်ပါသည်မျှသာမကပဲ မိမိစိတ်ကူးနှင့် စာကြောင်းများကို တီထွင်ရေးသားစေလိုကြောင်း။
စသင်ရာတွင် ၀ လုံးကိုချည်း သုံးလေးမျက်နှာဝိုင်းစေခြင်းမှာ လွန်စွာ မှားယွင်းသော လုပ်ရပ်ဖြစ်သဖြင့် ကကြီး၊ ခခွေးစသော အခြား စာလုံးများနှင့်ပါ ရောသင်ရန်လိုကြောင်း။
အစိုးရပြဌာန်းစာအုပ်ကို အခြေခံမည်ဖြစ်သည့်တိုင် ဆရာကချည်း သင်ပေးနေခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ ကလေးများကိုပါ ပါဝင်စေရန် လိုကြောင်း။ ထိုအထဲတွင် ရုပ်ပုံများပြပြီး ရေးခိုင်းခြင်း၊ စာလုံးတွဲသည့် ဂိမ်းများ ကစားစေခြင်း၊ ပုံပြောပြခြင်း၊ ကဗျာများ စုပေါင်းရွတ်ခြင်း၊ ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာများ ပြ သင်ခြင်း စသည်တို့ ပါဝင်ကြောင်း၊ သင်ရိုး အသေးစိတ်ရေးပြီးလျှင် အီးမေးဖြင့် ပို့ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း။
တစ်ယောက် တပေါက် စိတ်ကူး တည့်ရာ ရေးနေ ခြင်းထက် ဦးအေး ငြိမ်းရေးပေးပါက အားလုံး တပြေးညီ ဖြစ်သွားမည်ဟု တစ်ယောက်က အကြံပြုပါသည်။
ထို့ကြောင့် ကျွန်တော့်သားကို စာသင်ပေးစဉ်က ကျွန်တော် လေ့ကျင့်ခိုင်းသည့် စာကြောင်းများကို အီးမေးပို့ပေးပါမည်။
မိမိပတ်ဝန်းကျင်မှ ပစ္စည်းများကိုကြည့်ပြီး အရေးခိုင်းခြင်း၊ မိမိမြင်တွေ့ ရသည်များကို ပြန်ပြောခိုင်းခြင်း စသည်တို့လည်း လုပ်ခိုင်းစေနိုင် ပါသည်ဟု ဒေါ်မော်မော်လွင်မှ ဖြည့်စွက်ဆွေးနွေးပါသည်။
အမှားအနည်းဆုံးကလေးများကို ကာတွန်း sticker လေးများ ပေးခြင်း ဖြင့် ပိုမို စိတ်ဓာတ်တက်ကြွစေနိုင်ကြောင်း တစ်ယောက်က အကြံ ပေးရာ အားလုံးသဘောတူကြပါသည်။
လောလောဆယ် သင်တန်းကြေးကို တစ်လ (၂၀) သတ်မှတ်ထားရာ နောင်တွင် (၅၀) ထိ တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ရန် ဆွေးနွေးပါသည်။
အခန်းမှာ အခမဲ့ဖြစ်သဖြင့် သောက်ရေခ၊ မီးခ စသည်တို့အတွက် မိဘ များကို စေတနာရှိသမျှထည့်ဝင်ရန် ပြောကြရေး အားလုံးသဘောတူပါ သည်။
လောလောဆယ် စာအုပ်များပုံနှိပ်ခြင်း၊ ချုပ်ခြင်း၊ စာရေးကိရိယာများ ၀ယ်ယူခြင်း စသည်တို့အတွက်သုံးစွဲရန် တက်ရောက်လာသူများမှ တစ်ယောက်တစ်ဆယ် ထည့်ဝင်ပါသည်။
ကျောင်းသားကိုင်စာအုပ်များချုပ်ရန် (အုပ် - ၃၀)
လေ့ကျင့်ခန်းစာရွက် (၄) ကြောင်းမျဉ်းများထုတ်ရန်။ တစ်ဦး - (၅) ရွက် နှင့် ကျောင်းသား (၃၀) စာ။
ခဲတံ၊ ချွန်စက်၊ ခဲဖျက်၊ whiteboard marker, duster များဝယ်ရန်
Lesson Plan ရေးပို့ရန်
တန်းခွဲ (၁) - သင်ကြားမည့်သူ - ဒေါ်ကြူကြူမေ
အကူ - မအေးမြတ်သူ၊ ဒေါ်သန်းသန်းဝင်း
တန်းခွဲ (၂) - သင်ကြားမည့်သူ - ဒေါ်စမ်းစမ်းဝေ
အကူ - မနှင်းလဲ့လဲ့သာ၊ မခင်စန္ဒာနွယ်
အခြားသူများလည်း လိုလျှင်လိုသလို လာကူပေးပါမည်။ သင်ကြားမည့်သူ မအားလပ်ပါက ကြိုတင်အကြောင်း ကြားကာအခြားသူ တစ်ယောက်က ၀င်သင်ပေးပါမည်။
ပျော်ရွှင်စွာနှုတ်ဆက်ကြရင်း စည်းဝေးပွဲကို ရုပ်သိမ်းပါသည်။
၁၉ ဖေဖော်ဝါရီလ၊ ၂၀၁၇
စင်ကာပူရောက်ကလေးများအတွက် မြန်မာစာသင်တန်းတွင် လူပြည့်သွားပါပြီး။ နောက်ထပ်ရောက်လာသူများကို အရံအနေနှင့်သာ လက်ခံပါမည်။ လက်ရှိတက်နေသူများထဲမှ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ဆက်မတက်၊ သို့မဟုတ် ထုတ်ပယ်လိုက်ပြီး နေရာလပ်သွားမှ ရပါမည်။ အခန်းနေရာအခက်အခဲကြောင့် လူဦးရေကန့်သတ်ထားရခြင်းအပေါ် နားလည်ကြလိမ့်မည်ဟု ယူဆပါကြောင်း။
(ကျောင်းသားနဲ့ဆရာမတွေအတွက် စာအုပ်ရိုက်ဘို့ ဆိုင်သွားစုံစမ်းတာ အောင်မယ်လေးဗျာ၊ တစ်အုပ်ကို ၅၀ ကျမယ် ဆိုပါလား။ နင်ရို့တော့ ပိုက်ဆံမပေးဘူး။ ငါ့ဘာသာငါ ရိုက်မကွာလို့ ကိုယ့်ဘာသာ ရုံးကစက်မှာထုတ်၊ ကိုယ့်ဘာသာ စာအုပ်ချုပ်လိုက်တယ်။ PM ကို ဒီလိုဒီအကြောင်းပဲ ရှင်းပြပြီး နင်ရို့ဘို့ ငါ ပက်တီကက်ရ်ှပေးပါမယ်ကွာဆိုတော့ မလိုပါဘူးကွာ၊ စာအုပ်ထုပ်သာဝယ်လာခဲ့ပါ တဲ့။ အာ၊ ဘယ်တရားမတုံးကွဲ့၊ ဒါ ရုံးကစက်ပဲ။ ငါ ပိုက်ဆံ ၂၀၀ ပေးပါမယ်ဆိုပြီး သူတို့ရှေ့မှာ ပေါ်တင်ရိုက်တာပါ။
ကျောင်းသားကိုင် အုပ် ၃၀၊ ဆရာကိုင် စာအုပ်တစ်မျိုးကို ၅ အုပ်နဲ့ ၃ မျိုး ဆိုတော့ ၁၅ အုပ်။ စုစုပေါင်း ၄၅ အုပ်ပေါ့။ လေ့ကျင့်ခန်းအတွက် ၄ ကြောင်းမျဉ်းကိုတော့ အိမ်က ရီဆိုက်ကယ်တွေယူသွားပြီး ထုတ်လိုက်တယ်။)(အစကတော့ တစ်အုပ် ၁၀ လောက်ပေးမလားလို့။ သူက ပိုက်ဆံပေးစရာမလိုပါဘူးကွာဆိုတာနဲ့ အားလုံးအတွက် ၂၀၀ လုပ်လိုက်တာ။ တန်ပါတယ် နော။ ပိုက်ဆံပေးထားတော့ အားမနာရတော့ဘူးပေါ့။)
၂၅ ဖော်ဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၁၇
လာမဲ့စနေ (4/3/2017)၊ ညနေ (၆) နာရီမှာ ကလေးများအတွက် မြန်မာစာသင်တန်း စ ပါမယ်။ သင်ကြားဘို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဆရာမနဲ့ သင်တန်းအကူတွေက အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
တန်းခွဲ (၁) - သင်ကြားမည့်သူ - ဒေါ်ကြူကြူမေ။ သင်တန်းအကူ - မအေးမြတ်သူ၊ ဒေါ်သန်းသန်းဝင်း
တန်းခွဲ (၂) - သင်ကြားမည့်သူ - ဒေါ်စမ်းစမ်းဝေ။ သင်တန်းအကူ - မနှင်းလဲ့လဲ့သာ၊ မခင်စန္ဒာနွယ်
စာသင်ခန်း။ #05-21A, Peninsula Plaza
သင်တန်းကို ညနေ ၆ နာရီမှာ စတင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် အခန်းကို ၅ နာရီခွဲထက် နောက်မကျစေပဲ အရောက်လာခဲ့ကြဘို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
သင်မဲ့စာရင်းထဲမှာမပါပေမဲ့ တခြားသူတွေကိုလည်း လာစေချင်ပါတယ်။ လိုတဲ့အကြံဉာဏ်တွေ ပေးမယ်။ လိုတာတွေ ကူလုပ်ပေးမယ်ပေါ့။
၂။ မိဘတွေကို သင်တန်းစည်းကမ်းတွေ ရှင်းပြရပါမယ်။
၃။ ကျောင်းသားတွေနဲ့ ဆရာမတွေ မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။
၄။ ဘယ်လိုသင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း မိတ်ဆက်ပါမယ်။
ကျောင်းသားစာရင်းကို ပထမဆုံးနေ့ ကျောင်းအပ်တဲ့စာရင်းကို အတည်ယူပါမယ်။ အကြောင်းကြောင့်ပျက်ကွက်တဲ့သူတွေကို နောက်အချိန်တွေမှာ လက်မခံတော့ပါဘူး။ လူပြည့်သွားလို့ အရံလက်ခံထားတဲ့သူတွေကို မလာတဲ့သူတွေနေရာမှာ အစားထိုး သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့အိမ်ကနေ ပင်နင်ဆူလာကို ၁ နာရီနဲ့ ၁၅ မိနစ်လောက် သွားရပါတယ်။ ပင်နင်ဆူလာကို ၅ နာရီခွဲရောက်ဘို့ ၄ နာရီလောက် အိမ်ကထွက်ပါမယ်။ အဲဒါကြောင့် စာအုပ်သယ်မဲ့သူတွေ ကျွန်တော့်အိမ် (#15-233, Blk 663D, Jurong West St. 65) ကို ညနေ ၄ နာရီလောက် အရောက်လာကြဘို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
ကျွန်တော် သင်တန်းစည်းကမ်းတွေရေးပြီး ကျောင်းခေါ်ချိန်စာရင်းနဲ့အတူ ပို့ပေးလိုက်ပါမယ်။ ကျောင်းသားစာရင်း အတည်ဖြစ်သွားရင် ကျောင်းသားကဒ်လေးတွေလုပ်ပေးဘို့ စိတ်ကူးထားပါတယ်။
၁ မတ်၊ ၂၀၁၇
စင်ကာပူရောက်ကလေးငယ်များအတွက် မြန်မာစာသင်တန်းကို အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း စတင်ပါမယ်။
နေ့ရက်။ ။ 4/3/17
အချိန်။ ။ 6:00 pm
နေရာ။ ။ #05-21A, Peninsula Plaza
အခြေခံသင်တန်းတက်ရန် စာရင်းပေးထားသူများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။ (ပုံ ပူးတွဲ)
အလယ်ဆင့်သင်မဲ့ သူက နှစ်ယောက်တည်း (မောင်ဘုန်းမင်းမြတ်၊ မမြမြင့်မိုရ်ဇော်) ရှိလို့ လောလောဆယ် မသင်ဖြစ်သေး ပါဘူး။ အနည်းဆုံး (၅) ယောက်လောက်ရမှ စမယ် မှန်းထားပါတယ်။
အတန်းတက်မဲ့သူစာရင်းကို ပထမဆုံးနေ့ (4/3/17) နေ့လာတဲ့သူစာရင်းကိုပဲ အတည်ယူပါမယ်။
လာဘို့ပျက်ကွက်သူတွေနေရာမှာ အရန်သတ်မှတ်ထားတဲ့သူတွေနဲ့ အစားထိုးပါမယ်။
သင်တန်းကို ၆ နာရီမှာ စနိုင်အောင် ၅း၄၅ ထက် နောက်မကျစေဘဲ လာကြဘို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
ပထမဆုံးနေ့ဖြစ်လို့ ကျောင်းသားလက်ခံတာ၊ စည်းကမ်းချက်တွေ ပြောပြတာ။ မိတ်ဆက်တာ စတာတွေ လုပ်ရမှာမို့ အချိန်ယူရပါလိမ့်မယ်။
Posted by အေးငြိမ်း at 4:13 PM